Ozi banyere Apple. Ihe niile gbasara Mac World
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ezuru ohi iPad
Nwa, isiokwu nwere ike ịpụta ìhè, mana n'oge na-adịghị anya ịkwesịrị ịma ihe ị ga-eme mgbe ezuru iPad. Ma agbanyeghi na akụkụ ụfọdụ metụtara iPhone, iPod Touch na iMac, Achọrọ m iji ohere a hazie ya sọpụrụ ihe m mụtara ebe ahụ: 1. Zere ka o kwere mee ...
BlogPad - WordPress Editor maka iPad
Emechara m chọta onye nchịkọta akụkọ nke juru m afọ site na iPad. N'agbanyeghị na WordPress bụ isi okwu ntanetị, ebe enwere ndebiri na plugins dị elu, nsogbu nke ịchọta ezigbo nchịkọta akụkọ abụwo nsogbu mgbe niile. Maka desktọọpụ, enweghị m ike ịhụ ihe. Agbalịrị m BlogPress, WordPress maka iOS, Blog Docs, ...
blog Emmanuel wordPress
Apple - Mac, Internet na Blogs, mbụ echiche
GIS Pro Ihe kacha mma GIS maka iPad?
Izu gara aga, mụ na otu enyi Canada nọ na-akparịta ụka nke gwara m banyere ahụmịhe ha nwere site na iji GIS Pro na usoro nyocha nke cadastral. Ọ fọrọ nke nta ka anyị ruo nkwubi okwu na ọ bụ ezie na e nwere ngwaọrụ ndị ọzọ, site na ihe dị na Storelọ Ahịa a ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kacha mma maka iOS, ihe ...
Bentley: Ngwa maka mobile na ndị ọrụ - na DGN-
Nkwado nke ọnọdụ nke ụlọ ọrụ ndị na-enye ngwa ọrụ maka Geo-engineering nwere na ọhụụ ha na mgbanwe nke teknụzụ ọhụụ. Ọnọdụ ahụ akara nke ọma, n'ụzọ ha si ere ọpụrụiche ha na nkwukọrịta ụlọ ọrụ ha, n'agbanyeghị na kwa ụbọchị ọdịiche dị n'etiti ọzụzụ na-esiri ike karị ...
android Bentley Systems DGN M-nlereanya Emmanuel
Apple - Mac, AutoCAD-AutoDesk, innovations, Microstation-Bentley
MundoGEO Magazine ugbu a na mbadamba
MundoGEO, ụlọ ọrụ na-anọchite anya ndị mmadụ n'ọhịa na mpaghara nkwukọrịta Latin America, ewepụtala ngwa abụọ ka e wee nwee ike ilele MundoGEO magazine site na ngwaọrụ mkpanaka, yana Apple's iOS na Android. Naanị afọ a, magazin a jikọtara ọdịnaya nke akwụkwọ akụkọ InfoGEO na InfoGNSS, gụnyere ya ...
android Emmanuel Magazines
Usoro nhazi ụwa dị ka ọrụ ngosi sayensị
Ihe omumu ihe omumu m nwoke alaghachila, na mgbe ya na onye nkuzi kparitachara uka banyere ohere ha nwere ike ime, ha mechara kwado otu nke o jiri wusi obi uto nke ... ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ... nye ha abụọ. Ọzọkwa n'ihi na ọrụ a bụ nke mbụ, anyị kpebiri na anyị agaghị ...
Apple - Mac, Cartografia, Akụziri CAD / GIS
Akwụkwọ 3, 10 ọhụrụ geofumadas nke August
Ọ dịkarịa ala, magazin atọ n'ọnwa a ewepụtawo isiokwu ndị na-adọrọ mmasị maka gburugburu ụwa, yana ụfọdụ n'ime anyị geeky manias, n'okpuru m na-atụ aro isiokwu 10 maka oge ịgụ akwụkwọ ahụike gị. Geoinformatics Ọkacha mmasị m n'ime ọtụtụ akwụkwọ akụkọ, na-abịa na mmasị na isiokwu ndị a: ISIP, sistemu nke ...
GIS Kit, n'ikpeazụ ihe ọma maka iPad
N'ikpeazụ, m hụrụ ngwa mara mma maka iPad maka ịdabere na data GIS n'ọhịa. Ngwaọrụ nwere ikike maka ọtụtụ ihe, ọ na - ahapụ ngwa m nwara dịka GaiaGPS, GIS4Mobile, ArcGIS maka iPad na GISRoam na akwa akwa; nke ikpeazụ dị ike mana ọ bụghị ezigbo enyi na-arụ ọrụ ma na-elekwasị anya na nyocha ...
Google Earth Emmanuel kml
Atụmatụ iji mara keyboard nke Ipad
Ọ dịghị ihe dị mma karịa kiiboodu Zagg iji rụọ ọrụ na iPad, nke ụzọ gosipụtagoro m na-eje ozi dị ka ihe ịtụnanya maka otu mita na dobe na ihe. Mana ijegharị ọ bụghị mgbe niile amara, yabụ lee ụfọdụ ndụmọdụ iji mee ihe kiiboodu mebere. 1. Ọ dịghị mma ime omume ọjọọ.
Ihe 3, 3 gburugburu
Magazin PC, mbipụta dijitalụ nke Julaị 2011, rutere taa.Eji m ohere a kwalite isiokwu nke mere m obi ụtọ ebe a na mmalite a na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe nke ịlaghachi iji aka anyị mee ihe niile. Na njedebe m na-akwalitekwa atụmatụ nke mmasị na akwụkwọ akụkọ abụọ ọzọ na gburugburu ebe obibi nke enwere ...
Olee weghara ihuenyo Emmanuel
Anyị na-ebi n'oge nri ngwa ngwa, ihe niile dị n'okporo ụzọ, modular, scalable na nke dị mkpa. Nke ukwuu nke mere na anyị na-amụta ihe na ụgbọ elu. Mgbe ihe dị ka ọnwa isii nke iji iPad, ọ bịara m otu m ga - esi mee ihe na desktọọpụ anyị na - akpọ "ebipụta ihuenyo" ma ọ bụ sụgharịa ...
Apple - Mac, Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ
Olee ruo faịlụ site na iPad na PC
Workingrụ ọrụ na mbadamba bụ omume anyị ga-eji, n'ihi na ọ bụ usoro a na-apụghị ịgbagha agbagha. N'okwu a, anyị ga-ahụ otu esi edozi esemokwu nke ịgafe data n'etiti PC na Ipad ma ọ dịkarịa ala nhọrọ atọ. 1. Site Itunes Nke a bụ ma eleghị anya ụzọ kachasị baa uru, ebe ọ bụ naanị ...
Blogsy, maka Blogs sitere na IPad
O yiri ka m mechara chọta ngwa iPad a na-anabata nke na-enye ohere ịde blọgụ na-enweghị nnukwu ihe mgbu. N'ihi ya, m na-agbalá »‹ BlogPress na ukara WordPress otu, ma m na-eche Blogsy bá »the onye ahá» rá »otu na okwu nke ihe ma á» bá »less obere enyi na enyi edezi. Ọ bụ ezie na m ga-edozi ọrụ ahụ na ihe oyiyi ejiri na ...
Apple - Mac, Internet na Blogs, njem
Gaia GPS weghara GPS ụzọ gasị, Emmanuel na mobile
Ebudatara m ngwa maka iPad nke hapụrụ m karịa afọ ojuju, na mkpa m nwere ịme nsuso na GPS wee jiri anya nke uche hụ ya na ntanetị ma ọ bụ Google Earth. Ọ bụ Gaia GPS, ngwa nke na-efu naanị $ 12 mana ọ ka na-arụ ọrụ ...
Google Earth gps Emmanuel kml
Magazin PC, na-aga na ụdị dijitalụ
Nsụgharị Bekee nke magazin a lara ezumike nká ruo ogologo oge, ọ bụ ezie na nsụgharị Hispanic kwupụtara ya, windo ụlọ ahịa na-aga n'ihu na-egosipụta akwụkwọ. N'ikpeazụ, mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, abịara m nabata na Televisa akwụsịla mmepụta na mbipụta ma enwere m mmetụta na ...
Apple - Mac, Internet na Blogs
The 2 Ipad, Site na anyị n'ọnọdụ
Nyaahụ bụ ụbọchị na-atọ ụtọ nke ukwuu maka ndị na-egwu teknụzụ Apple, ọkachasị ndị nwere ugbu a na ndị nwere ike iji mbadamba Ipad. Agbanyeghi na mkpụrụokwu nke zoro ezo na njinchọ ọchụchọ taa n'okwu a na-ajụ maka nkatọ nke Ipad 2, ọ bụrụ na ọ dị mfe ịzụta otu ugbu a, ọ bụrụ na enwere ike imelite Ipad 1 ...
Apple - Mac, ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, innovations, Microstation-Bentley
Na-eche maka 2 Iphone
Ọ na-atọ ọchị, mana akụkụ dị mma nke ndị ọrụ ikpo okwu mkpanaka na-eche ihe a ga-egosi n'ime awa ole na ole. Site na nkwụsị Apple na ekwentị mkpanaaka, anyị kwesịrị ịhụ ihe na - eme: Tom Tom ọ ga - ama otu esi ewetara ihe eji egwuri egwu nwere mmetụta dịka Ọrụ na afọ gara aga? Ga-alaghachi ...
Ngwa Google nwere ike ịgụ faịlụ dxf ugbu a
Naanị ụbọchị ole na ole gara aga, Google gbasawanyere nkwado ya maka akwụkwọ Google. Na mbụ, o siri ike ịhụ faịlụ Office dịka Okwu, Excel, na PowerPoint. Mgbe agụrụ ya naanị, Google gosipụtara nkwụsi ike ya n'inye Chrome nnukwu sistemụ arụmọrụ sitere na igwe ojii. A ga-atụ anya na ọrụ ndị a nwekwara ...
Apple - Mac, AutoCAD-AutoDesk, innovations, Internet na Blogs